ကလေးများ၏ မှတ်ဉာဏ်စွမ်းရည်ကို မြှင့်တင်ပေးခြင်း – Similac
ကလေးများ၏ မှတ်ဉာဏ်စွမ်းရည်ကို မြှင့်တင်ပေးခြင်း
သင်ကြားမှုနည်းလမ်းများစွာရှိသောကြောင့် ကလေးတိုင်းသည် တူညီသောနည်းလမ်းများဖြင့် သင်ယူလေ့မရှိပါ။ ၎င်းသည် ပင်ကိုယ်သဘာဝနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်၏ ပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းပေါ်တွင် မူတည်ပါသည်။ ပြုစုပျိုးထောင်ခြင်း အပိုင်းတွင် ဦးနှောက်အတွက် အာဟာရသည် မှတ်ဉာဏ်ထိန်းသိမ်းမှုကို တိုးတက်ကောင်းမွန်စေသည့် အရေးကြီးသော အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ပါသည်။ ကလေးတစ်ယောက်၏ သင်ယူမှုပုံစံနှင့် သင်ကိုယ်တိုင်မိဘတစ်ယောက်အနေဖြင့် ပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းနှင့် မှတ်ဉာဏ်စွမ်းရည်တိုးတက်စေသည့်အာဟာရ (ဥပမာ – Similac Gain IQ) နှစ်ခုလုံးအတွက် မည်သို့ ထောက်ပံ့မည်ကို ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့လေ့လာပါမည်။
အမြင်ဖြင့်သင်ကြားခြင်း : ပုံသဏ္ဍာန်များ၊ အရောင်များနှင့် ပေါင်းစပ်မှုများဖြင့် သင်ကြားခြင်း။
လူကြိုက်များသော ကလေးကာတွန်းများစွာသည် ထူးကဲသောပုံသဏ္ဍာန်များနှင့် ဟာသပုံသဏ္ဍာန်များ ဖြင့်အဘယ်ကြောင့်အမြဲရိုင်းပြနေသည်ဟု သင်ထင်ပါသလဲ၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းတို့တွင် ကြာရှည်ခံသော ခံစားမှုများ ရှိနေသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ နှုတ်ဖြင့်သတိပေးချက်များထက် ရုပ်ပုံများမှ အသေးစိတ်အချက်အလက် များဖြင့် ပြခြင်းသည် ကလေးများအတွက် ၎င်းအရာများကို မှတ်မိစေသည်။ သင့်ကလေးကို ကျားပုံတစ်ပုံပြသပြီး နှုတ်ဖြင့် ဖော်ပြခဲ့ပါက ကလေးသည် ၎င်းအရာကို ပိုမိုမှတ်မိပါလိမ့်မည်။
ကလေးများသည် ၎င်းတို့အတွက် နားလည်ရခက်သည်ဟုယူဆပါက ၎င်းတို့သည် မပါဝင်တော့ရန် ရွေးချယ်နိုင်သည်။ အားပေးမှုများမရှိလျှင် တက်ကြွမည်မဟုတ်ပါ။ ရိုးရှင်းမှုများသည် ကလေးများအတွက် ငယ်ရွယ်စဉ်အချိန်များတွင်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ သင်ကြားနေစဉ်တွင် ၎င်းတို့၏ စိတ်လှုပ်ရှားမှုများကို မျှဝေပါ၊ ထိုအရာအားလုံးသည် အပြန်အလှန်တုံံ့ပြန်မှု ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့ပျော်သည့်အခါတွင် သူတို့၏အတွေ့အကြုံများကို သူငယ်ချင်းနှင့် ဝေမျှနိုင်သလို ကလေးတစ်ယောက် သည်ပေါင်းသင်းဆက်ဆံမှုပိုကောင်းပြီး ယုံကြည်မှုရှိလေလေ သင်ယူရန်အတွက် စိတ်အားပိုမိုထက်သန်လေဖြစ်သည်။
မည်သည့်အရာကို မဆိုလုပ်ဆောင်ပြီးလျှင် တိုးတက် မှုများကိုသိနိုင်ရန်အတွက် ၎င်းအရာများကို မှတ်တမ်းတင်ထားပါ။ ၎င်းသည် မိဘအတွက်သာမက ကလေးအတွက်ပါဖြစ်ပါသည်။ ကလေးအချို့သည် ၎င်းတို့၏စာတတ်မြောက်မှုကို တစ်ချိန်တည်းတွင် ကျင့်သုံးပါက အချက်အလက်များနှင့် ကိန်းဂဏန်းများကို မှတ်မိနိုင်ဖွယ်ရှိသည်။ အရွယ်ရောက်ပြီးသူများအတွက်ပင် အကြောင်းအရာများကို ချရေးခြင်းသည် အတွေးအမြင်များကို အစီစဉ်တကျဖြစ်အောင်ကူညီပေးပြီး ကောင်းမွန်စွာ ပြန်လည်မှတ်မိနိုင်ပါသည်။
ဦးနှောက်အာဟာရအတွက် Omega-3 Fatty Acid နှင့် DHA (Docosahexaenoic acid) တို့သည် အဓိကဖြစ်သည်။ နှစ်ခုစလုံးသည် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိန်ခေါ်မှုများအတွင်း သွေးစီးဆင်းမှုကို တိုးမြှင့်ပေးခြင်းဖြင့် ကလေး၏ သိမြင်နိုင်စွမ်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းဆောင်တာများကို အကျိုးပြုပါသည်။ ၄င်းတို့ကို ငါး၊ အခွံမာသီးနှင့် သဘာဝအဆီအများစုတွင် တွေ့ရပြီးသင့်ကလေး၏အစားအသောက်များတွင် ပါဝင်ပါစေ။ သဘာဝဗီတာမင် Eနှင့် Lutein ( ရောင်ရမ်းမှုကို လျှော့ချပေးသည့်အာဟာရဓာတ်) သည် အတူတကွအလုပ်လုပ်ပြီး DHA ကို လျင်မြန်စွာကွဲထွက်ခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးသည်။ နှစ်မျိုးလုံးကို အစိမ်းရင့်ရောင် ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ၊ ဥများနှင့် အချို့သော အသီးအနှံများတွင် တွေ့ရပြီး သင့်ကလေး၏ အစားအစာများကို အရောင်အသွေး စုံလင်အောင် ထိန်းထားခြင်းဖြင့် ၎င်း၏ အကျိုးကျေးဇူးများ ရရှိမည်ဖြစ်သည်။
သင်ယူမှုပုံစံများကို ပြုစုပျိုးထောင်ပြီး အသစ်သစ်သောအရာများကို တွေ့ကြုံခံစားလာရသောအခါတွင် အပြောင်းအလဲများကို ကြိုတင်မျှော်လင့်ထားပါ။ အကောင်းဆုံး အရည်အသွေးရှိသော အာဟာရများကို ရရှိခြင်းသည် ဦးစားပေးဖြစ်သော်လည်း သင့်ကလေးအားစားသုံးစေရန် မှာ ခက်ခဲမှု နောက်ထပ်အဆင့်တစ်ခုဖြစ်သည်။ Similac Gain IQ သည်အသက်နှစ်နှစ်နှင့် အထက်ကလေးများအတွက်ကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးစေသည်။ Similac Gain IQ တွင်ပါဝင်သည့် အာဟာရဖြစ်သည့် 2’-FL HMO & Nucleotides သည် ကိုယ်ခံစွမ်းအားကို ထောက်ပံ့ပေးပြီး မှတ်ဉာဏ်စွမ်းရည်ကိုမြှင့်တင်ပေးသည့်အဓိက အာဟာရ ဆယ်မျိုးပါဝင်သည်။ အထူးပေါင်းစပ်ပါဝင်သော လူတင်း၊ သဘာဝ အာအာအာ ဗီတာမင် အီး၊ ပရိုတင်း, ကယ်လဆီယမ်, ဗီတာမင် ကေ နှင့် ဒီ များသည် အရိုးနှင့်သွားများကိုသန်မာစေပြီး သင်ကြားမှုစွမ်းရည်ကိုလည်းထောက်ပံ့ပေးသည်။ စားအုန်းဆီမပါဝင်သည့် ဖော်မြူလာနှင့် အထူးပေါင်းစပ်ထားသည့် အသီးအရွက်ဆီများသည် ပိုမိုကောင်းမွန်သော အာဟာရကိုပေးပို့မှုနှင့် စုပ်ယူမှုအားကောင်းစေရန်အတွက်အသုံးပြုပြီး ကလေးများ၏ဝမ်းဗိုက်ပြဿနာ ကိုဖြေရှင်းပေးပါသည်။
Buck R. et al. 2004, Schaller et al 2004
Based on parental responses inaconsumer perception study conducted among 300 Phillipino mothers with children 36 months and older
Lasekan et al. (2017) – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5475287/
De Souza et al. (2017) – https://wires.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/wcs.1398